जसपामा उपेन्द्र र बाबुरामबीच लफडा, के हो रहस्य ? — Imandarmedia.com
जसपामा उपेन्द्र र बाबुरामबीच लफडा, के हो रहस्य ?
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच टकराव देखिएको छ। जसपाको सरकारमा सहभागी हुने नेतृत्वकर्ताबारे विवादले टकराव बढेको हो।अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै सरकारमा जसपाको नेतृत्व गरेर जान चाहे। त्यसप्रति बाबुराम असन्तुष्ट भए। उनले यादवबाहेकलाई सरकारमा नेतृत्वकर्ता बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बाबुराम राजेन्द्र श्रेष्ठलाई जसपाको नेतृत्व गराएर सरकारमा लान चाहिरहेका छन्। तर, उपेन्द्र यादव त्यसको विपक्षमा छन्। मधेश केन्द्रित नेताहरचिढिनसक्नेमा उनी सतर्क छन्। यादव त्यसकारण पनि आफै सरकारमा नेतृत्व गरेर जान चाहिरहेको बुझिएको छ। तर, उनलाई रोक्न खोजेपछि सरकारमा सहभागी नै नहुने सम्ममा यादवले रणनीति बनाएका छन्। आफूलाई रोक्न खोजे जसपालाई नै सरकार बाहिर राख्ने यादवको चाहनाले तरंग नै ल्याएको छ।
मन्त्री बन्नकै लागि कतिपय सांसद उपेन्द्र यादवको पक्षमा गएका छन्। उनीहरु सरकारमा सहभागी हुनैपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विषय पनि उठेको छ। तर, यादवलाई रोक्ने खेलहरु भइसकेको छ। यादवलाई रोकेर राजेन्द्र श्रेष्ठलाई नै बढाउने बाबुराम भट्टराई र अशोक राईको जोडबलले मधेश केन्द्रित नेताहरु असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्।
जसपामा महन्थ ठाकुर समूह पाखा लागिसकेका छन्। तर ३५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिमा उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई अशोकराईहरु भन्दा कमजोर देखिने अवस्था बनेको छ। सरकारमा जाने या नजाने विवाद र गएमा मन्त्री बनाउने विषयमा जसपाभित्र नयाँ विवाद बढ्ने देखिएको छ।
यसै गरि : एमाले बैठकमा ओली र गौतमबीच चर्काचर्की
जे पाए त्यही बोल्ने? पार्टी अध्यक्षले मनलागी बोल्न पाइन्छ भने विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्यो। मनलाग्दी बोल्ने जो कोहीलाई अनुशासनको कारबाही हुनुपर्यो, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम नेकपा एमालेको आजको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जँगिए।
गौतमले ओलीमाथि आक्रोश पोखिरहँदा बैठकमा सन्नाटा छाएको थियो। उनी त्यसपछि झन् कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै गए। उनले भने, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भएका राजनीतिक मतभिन्नताका सन्दर्भमा अध्इक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई अपराधी भन्नुभयो, गद्दार र देशद्रोही भन्नुभयो। अध्यक्षले त्यस्तो भन्न पाइन्छ भने विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्यो। बोल्नुहुँदैन भने किन बोल्नुभयो ? मनपरी गर्न पाइँदैन।
पार्टीमा अनुशासनहीन र गलत गर्ने जोसुकैमाथि कारबाही हुने समेत चेतावनी दिए। उनले भने, पार्टीमा कसैले गल्ती गर्यो भने राजनीतिक कारबाही हुन्छ। उनले घुमाउरो तरिकाले ओलीमाथि कारबाहीको विषय पनि उठाए।
ओलीले अध्यक्षका रुपमा मनलाग्दी गरेको समेत आरोप लगाए। उनले ओलीमाथि व्यङ्ग्य गर्दै भने, अध्यक्षले मनपरी गरेको विषयलाई यी अध्यक्षका अधिकारहरु भन्ने शिर्षकमा केही अधिकारहरु थप्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई मनलाग्दी गर्दा पनि आममाफी हुनेछ भन्ने विधानमा किटानसाथ उल्लेख गरिनुपर्छ।
गौतमले विधानमै कतिलाई अपराधी, देशद्रोही र गद्दार भन्न सकिने विधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। आफूविरुद्ध कडा रुपमा बोल्न थालेपछि ओली पनि आक्रोशित भए। त्यसपछि दुवैबीच चर्काचर्की भयो। गौतम बैठकबाट निस्किएर हिंडे। उनी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने गरी उठेको बुझिएको छ।
ओलीसँग पछिल्लो समय असन्तुष्ट गौतम माधवकुमार नेपाल पक्षमा छन्। यद्यपि, उनी पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन्। बैठक नेपाल पक्षले भने बहिष्कार गर्दै आएको छ।
यसै गरि, एमालेको संस्थापन पक्षले संगठनात्मक संरचनामा उथलपुथल आउने गरी विधान संशोधनको मस्यौदालाई एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाएपछि पाँच महिनादेखि जारी एमाले विवाद विभाजनतिर ढल्केको छ । संस्थापन पक्षले सोमबार केन्द्रीय कमिटीबाट विधान संशोधन मस्यौदा पारित गरेपछि एमालेमा एकताको प्रयास कमजोर र विभाजनको सम्भावना बलियो बनेको छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समान हैसियतको अध्यक्ष दिन नसकिने निष्कर्षसहित ओलीले एकताका नाममा समय नखर्चने र ढोका पनि बन्द नगर्ने रणनीति बनाएका छन् । स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार अध्यादेशको बलमा नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने आधार देखिएको भन्दै ओलीले एमालेको संगठनात्मक ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
संवादका नाममा नेपाललाई नपर्खने, एकताको कोसिसमा रहेका नेताले परिणाममुखी नतिजा दिए स्वीकार गर्ने, वार्ताका लागि आफैँ पहल नगर्ने र पार्टीको वैधानिकता बचाउँदै नेपाल समूहका धेरैभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्तालाई समाहित गर्ने ओलीको पछिल्लो रणनीति छ । एकपछि अर्को सर्त राखेर नेपालले एकतालाई जटिल बनाएको ओलीको बुझाइ छ । नाटकीय घटनाक्रम विकसित भएन भने एमालेको एकता धेरै नै कठिन मोडमा पुगेको छ ।
सोमबार स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकले दशौँ विधान महाधिवेशनको विधान मस्यौदा पारित गरेपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल पक्षले राखेको अध्यक्ष र हस्ताक्षरको माग स्वीकार्य नभएको प्रस्टयाए । ‘यो स्वीकार्य विषय होइन,’ ज्ञवालीले भने । वरिष्ठ नेता नेपालले नै अर्को अध्यक्ष बनाउन राखिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेपछि औचित्य सकिएको पनि उनले प्रस्ट्याए ।
ओलीमाथि वामदेव प्रहार : पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षको विषयमा चर्चा चलिरहेका वेला ओलीले अहिलेभन्दा पनि शक्तिशाली अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै विधानमा अधिकार थप्नुपर्ने व्यंग्यात्मक प्रस्ताव गरेका छन् । ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ भन्ने र पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही शीर्षकअन्तर्गत केही बुँदाहरू थपौँ, पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरौँ,’ स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमको प्रस्ताव थियो ।
‘अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै गर्दा त्यसो हुन्छ भने पनि सही भन्नुभयो । अध्यक्षको प्रस्ताव लिएर केही साथीहरू माधव कमरेडकहाँ जानुभयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, उहाँले आफूलाई पदलोलुप देखाएर बदनाम गर्न ल्याइएको प्रस्ताव हो, मेरो त नीति र विधिमा हो, पदमा होइन भन्ने ढंगले मलाई त्यो प्रस्ताव मञ्जुर छैन भन्नुभो । जसका लागि प्रस्ताव गरिएको हो, उहाँलाई नै मञ्जुर नभएपछि अब गर्ने के ?’
तर, माधव नेपाल पक्षले भने ओलीले एकता नचाहेको भन्दै स्वयं आफैँले गरेको समान हैसियतको अध्यक्ष र हस्ताक्षर चलाउने प्रस्तावबाट ब्याक भएर संगठनात्मक गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ । नेपाल पक्षका नेता विरोध खतिवडाले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा यसबाट ओलीले गर्ने बेइमानी स्पष्ट भएको र एकताको सम्भावना करिब सकिएको बताए । खतिवडाले त्यसैका कारण अहिले ओलीले आफ्नै क्याम्पमा पनि विश्वास गुमाउँदै गएको र आफू पक्षका नेताहरूमा पनि बाँकी रहेको भ्रम टुटेको बताए ।
सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाहेक बाँकी पदाधिकारीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले चुन्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्तावलाई कार्यकर्ता तहसम्म छलफलमा लैजाने निर्णय गराएर ओलीले आफ्नो बाटो तय गरेका छन् ।
ओलीपक्षीय नेता खगराज अधिकारीले बल नेपालको कोर्टमा पुगेको बताए । ‘केपी ओलीले त आफ्नो विषय स्पष्ट राख्नुभएको नै छ । जुन सार्वजनिक भइसकेको छ । अब माधव नेपालले के गर्नुहुन्छ भन्ने हो,’ उनले सम्भावित खतराबारे भने, ‘एकता जोखिममा छैन, सामान्य अवस्थामा नै छ । एमालेमा रहन चाहनेहरू पार्टीमा फर्किने र नचाहनेहरू बाहिरिने सामान्य हो । यसमा कसैले आश्चर्य मान्नुपर्दैन । किनभने हदैसम्मको अराजकता हामीले आजसम्म सहेका छौँ ।’
केन्द्रीय कमिटीबाट पारित विधान मस्यौदा प्रस्तावलाई मंगलबारै जिल्ला तहसम्म छलफलका लागि पठाउने र एक महिनाभित्र संकलित सुझाबसमेत समेटेर विधान मस्यौदा प्रस्तावलाई महाधिवेशनमा लैजाने तयारी छ । आगामी २७ र २८ भदौमा एमालेले विधान महाधिवेशन आयोजना गर्दै छ ।
संस्थापन पक्षले पार्टी सञ्चालनको महत्वपूर्ण दस्ताबेज विधान मस्यौदालाई एकलौटी निर्णय गरेर कार्यकर्ता तहमा छलफलमा लगेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष पनि समानान्तर गतिविधि सक्रिय बनाउने योजनामा देखिएको छ । सम्मानजनक एकताका लागि समान अध्यक्ष र अधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाए पनि संस्थापन पक्षले त्यस्तो माग पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट्याएपछि नेपाल पक्ष समानान्तर गतिविधि सक्रिय बनाउने योजनामा देखिएको हो ।
नेपाल समूहले जनसंगठनका कमिटी, मातहत कमिटीको गठन र भेलालाई पनि नरोक्ने र केही दिनभित्रै ठोस निष्कर्ष नआए सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणलगायतका कामलाई तीव्रता दिने तयारी गरिरहेको छ । तर, वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको गत २२ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले भने १० बुँदे सहमतिको जगमा संस्थापन पक्षसँग सम्मानजनक एकताको प्रयास अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि संगठनात्मक गतिविधि रोक्न ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै संस्थापन पक्षले २४ साउनका लागि डाकेको बैठक एक दिनका लागि स्थगित गरेको थियो । तर, ओली र नेपालबीच सहमति त परै जाओस् भेटवार्तासमेत नभएपछि संस्थापन पक्षले विधानका विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एकलौटी निर्णय गरेको छ । नेपाल पक्षको मागअनुसार गतिविधि रोक्दा पार्टी विघटनको तहमा पुग्ने भएकाले सहमतिको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै गतिविधि नरोक्ने संस्थापन पक्षको अडान छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘फर्किने साथीहरू पुरानै हैसियत र जिम्मेवारीअनुसार काममा लाग्नुहुनेछ । तर, अनन्तकालसम्म पर्खिनुको अर्थ त पार्टीलाई विघटनको दिशातिर लैजानु हो । पार्टीको सदस्यता पनि नवीकरण गर्नुहुन्न भन्ने त पार्टीको भलो गर्ने सुझाब त होइन ।’
तर, नेपाल पक्ष यस्तै अवस्थामा पार्टी एकताको सम्भावना सकिएको निष्कर्षमा पुगेको छ । नेता खतिवडाले अब राजनीतिक कोर्स नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने बताए । ‘अब राजनीतिक कोर्स नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ । यो तपाईंले चाँडै नै थाहा पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक प्राणी हौँ, यत्तिकै बस्दैनौँ । संविधान, कानुन, नियमअनुसार राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ ।’
यसअघि वरिष्ठ नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै ओलीले एकताको ढोका बन्द नगरेसम्म एकताकै लागि प्रयास गर्ने नीति रहेको प्रस्ट्याएका थिए । ओली पक्षले कारबाही गरेर ढोका बन्द नगरेसम्म नयाँ पार्टी खोल्ने या सरकारमा जाने निर्णय गर्दा पार्टी विभाजनको अपजस बोक्नुपर्ने र त्यसले राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने त्रास नेपाललाई छ । उता, ओली पनि केही समय नेपाल पक्षलाई सकभर गलाउने र निर्णायक स्थिति देखिएको अवस्थामा मात्र सम्झौता गर्ने मनस्थितिमा छन् ।
पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षको विषयमा चर्चा चलिरहेका वेला ओलीले अहिलेभन्दा पनि शक्तिशाली अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै विधानमा अधिकार थप्नुपर्ने व्यंग्यात्मक प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ भन्ने र पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही शीर्षकअन्तर्गत केही बुँदाहरू थपौँ, पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरौँ,’ स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमको प्रस्ताव थियो ।
बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी शक्तिसँग गठबन्धन गरेर प्रगतिशील र जनपक्षीय शक्तिविरुद्ध आक्रमण गरिएको बताएका थिए ।त्यसैबीच, एमसिसीलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो ‘पोजिसन’ बदलेका छन् । सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले संशोधनसहित एमसिसी पारित हुनुपर्ने मत राखेका छन् । ओली आफू प्रधानमन्त्री भएको वेला परिमार्जनविनै एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा थिए ।
एमालेले नेपाली भूमिका रूपमा नक्सासमेत प्रकाशन भइसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमिलाई सरकारले साझा कार्यक्रममा स्वीकार नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।